Asingagumi Anopa $ 500 kune iyo GNOME Coding Dzidzo Dambudziko | Linux Vakapindwa muropa
Asingaperi anopa $ 500 kune iyo GNOME Coding Dzidzo Dambudziko
Munguva pfupi yapfuura iyo GNOME Foundation yakazivisa iyo "Coding Dzidzo Dambudziko", Chiitiko chematanho matatu chekupa vadzidzi nevadzidzisi mukana wekugovana mazano uye mapurojekiti matsva ekudzidzisa zvirongwa vachishandisa yakavhurika sosi software.
Zvemari (uye mubairo kune vanokunda), zvisingaperi yakapa zviuru mazana mashanu zvemadhora kuti ipe simba kumakwikwi uye ita kuti ive inokwezva kuvadzidzi nevadzidzisi pasirese. Hafu yemiriyoni yemadhora chimiro chinokwezva chaizvo chezvikwata (kana vanhu) zviri munzvimbo dzekutanga.
zvisingaperi ikambani iripo kwazvo munharaunda yehunyanzvi pasirese. Chinangwa chayo chikuru ndechekubatsira vana kuwana mukana wedigital uye kuitora. Pakati pemamwe mapurojekiti ivo vanogovaniswa zvisingaperi OS neLinux mini makomputa ivo vanotengesa kubatsira avo ekudzidzisa mapurojekiti.
Mukuburitswa kwepepanhau, Neil McGovern, CEO weGNOME Foundation akataura nezvekufara kuti Endless ajoina:
"Isu tinofara kuona izvo zvatinogona kuwana kana isu tikatsigira fungidziro nehunyanzvi hwenzvimbo yedu yepasi rose. Tinotarisira kubatana kwakasimba kwevadzidzi vedu nevadzidzisi kuti vaongorore mikana yesoftware yakakura uye dzakasiyana. Kusvika kumazera matsva kwakakosha kuverengera ramangwana remahara software mumakore anotevera."
Kusvika pamadhora zviuru zana kune vanokunda
Pamusoro pezvo, kuchiziviso nemupiro, izvo zvisina ruzivo rwakawanda, zvinozivikanwa kuti chero munhu - timu kana munhu - anogona kuendesa chikumbiro chake kuti ave chikamu chemakwikwi.
Izvo zvakatemwa kuti mudanho rekutanga Kuchave nevanokunda makumi maviri avo vanogashira madhora zviuru mazana matanhatu nemazana mashanu perimwe pfungwa yavo.
Kwechikamu chechipiri, vanokunda vanofanirwa kugadzira prototype inoshanda yezvavanofunga uye vashanu chete vakasarudzwa vanoenderera kumberi kwechitatu, mumwe nemumwe achiwana mubairo we $ 25,000.
Muchikamu chekupedzisira, chigadzirwa chakakwenenzverwa chichagadzirwa mune yakazara vhezheni uye kunongova nevaviri chete vanokunda. Ivo vatatu vanopedzisa vanogamuchira $ 3, nepo ivo vaviri vanokunda vanowana madhora zviuru zana zvemadhora. Kana iwe uchida kuziva zvese izvo zvemakwikwi aya unogona pinda iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Asingaperi anopa $ 500 kune iyo GNOME Coding Dzidzo Dambudziko
ExTiX 19.8 inoenda kuDepin, ichisiya Debian / Ubuntu